ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့ , ဘရာဇီး - I LOVE RIO DE JANEIRO
ငါရီယိုမြို့ကယနေ့သောလှပတမူထူးခြားတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုရှုထောင့်တစ်ခု, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းအနက်ကိုအတူ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့၏တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ် LOVE ။
အရည်အသွေးအခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ကိုသုတေသနပြုမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း, Portal ကိုသူတို့အက hidden ရှုထောင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုခြင်း, အချိန်သို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းများအတွက်တိုက်ရိုက်ဧည့်သည်များအများစုအားဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားမရနိုငျကွောငျးရီယို၏များစွာသောထောင့်တစ်လျှောက်ကို virtual အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါသည် မြို့တော်။
အဆိုပါ ILOVERIO.comဝဘ်ဆိုဒ်ထုတ်ကုန်များ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့, မြို့နှင့်ပြည်နယ်များ၏ပုံရိပ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်မှု အသုံးပြု. တစ်ခုချင်းစီ၏ငါအချစ်ရီယိုအစုစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့မြို့နှင့်ပြည်နယ်တဝိုက်ပြန်ကြားရေးနှင့်အကြံပေးချက်ကိုအကောင်းဆုံးအခရီးသွားလမ်းညွှန်အချို့ကိုအပေါ်, ခရီးစဉ်, တောင်တက်, အနည်းငယ်သာလူသိများရတနာစာဖတ်သူများနှင့်ဧည့်သည်များမှရှင်းလင်းသောကြ၏။ တောင်ကြီး, ကမ်းခြေတွေ, ပန်းခြံများနှင့်အခြားပိုမို - ငါရီယိုအကောင်းဆုံးမတူကွဲပြားသောရှုခင်းများမွေ့လျော်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်နှင့်အထူးပြုအကြံပေးချက်များဆောင်တတ်၏ LOVE ။ စုံလင်သောဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်းအနေဖြင့်တစ်ဦးမိုးရာသီနေ့အဘို့ရွေးချယ်စရာတွေကိုအဖြစ်သင်တန်းတွေနဲ့လေ့လာရေးခရီးရန်။ အဆိုပါ Portal ကိုမဆိုရီယို၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဘယ်မှာအကောင်းဆုံးကိုလမ်းပြသောရှာဖွေဖို့ရောက်ရန်မည်သို့သတင်းအချက်နှင့်အတူမြို့ရဲ့ခရီးသွားဧည့်မှအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ပျော်စရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုညျခှနျအားအတွေ့အကြုံများကိုကျူးလွန်သည်။
ငါရီယိုယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအသည်းအသန်ဖြစ်ပြီး, မြို့အနှံ့ဝါဝါကြောင့်အနုပညာဖန်တီးမှု၏ကြီးစွာသောစည်းစိမ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြည့်ရှု LOVE ။ အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှု၏ရီယိုရဲ့ repertoire ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ, ပြဇာတ်ရုံဘဏ်ဍာ, အနုပညာပြပွဲနှင့်ကခုန်ရှိုးများအပါအဝင်ရှငျးလငျးဖျောပွဖြစ်ပါတယ်။ favela ဘဏ္ဍာကိုမှအမြင့်ဆုံးပြဇာတ်ရုံထဲကနေအနုပညာသရုပ်မြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုပိုမို texture ထည့်သွင်းစာဖတ်သူများမှမိတ်ဆက်ပြသကြသည်။ အဆိုပါဝဘ်ဆိုဒ်မူထူးခြားတဲ့ Carioca အသုံးအနှုနျးမြား, သဘောထားနှင့်ထုံးစံမှ, ရေးခွအနုပညာကိုမှပျံသန်းစွန်ကနေ, ကခုန်သင်တန်းတွေမြို့ကို vibrancy နှင့်ဇာတ်ကောင် add သောနေ့စဉ်သုံး Recreational အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
စားနပ်ရိက္ခာတို့မိသားစုဘဝနှင့်လူမှုရေး interaction ကအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှကစားခြင်း, မြို့၏သမိုင်းဝင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှသက်သေခံ Carioca ယဉ်ကျေးမှု၏၎င်းပြင်ဆင်များ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်နဲ့ညစာစားကျောက်ပြားကိုမှာ အစားအစာရတနာတစ်ဦးကြွယ်ဝသော, စမ်းသပ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကြိုဆိုပွဲလူ့အဖွဲ့အစည်းကကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ငါရီယိုအကောင်းဆုံးသောဟင်းလျာအချို့ကို favelas မှချမ်းသာကြွယ်ဝရပ်ကွက်ကနေ, မြို့အနှံ့စားသောက်ဆိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကိုထုတ်လေ၏ LOVE ။ အဆိုပါသမိုင်းနှင့်အခြေခံ Carioca ဟင်းလျာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မပါဘဲခူးနှင့်အခွင့်ထူးခံအတွင်း Know-ကိုဘယ်လိုနှင့်အကြံပြုချက်များကိုတွဲပြီးတင်ပြကြသည်။
ရီယို၏မြို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစွာ-ဖြစ်လျက်ရှိမှ၎င်း၏ကတိကဝတ်တခုကနိုင်ငံတကာရှေ့ဆောင်တစ်ဖြစ်လာသည်။ ငါ Carioca ရွရွပြေးထံမှအိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပ gyms, ယောဂ, ဘာဝနာနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အာဟာရအကြံပြုချက်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရန်, ရီယိုကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရများ, အပန်းဖြေအကြံပေးချက်များနှင့်နည်းစနစ်ကိုထုတ်လေ၏ LOVE ။ Spas, ဆုတ်ခွာ, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးပြုစုပျိုးထောင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုသို့အစွန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြတ်တောက်နေထိုင်သူများနှင့်ဧည့်သည်များဆောင်ခဲ့စူးစမ်းနေကြသည်။ ငါရီယိုဇယား Carioca ဘဝကို၏နေ့လုပ်-up ကမှနေ့ရက်ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းပေါ်ပြူလာသဘောထားတွေ LOVE ။
ဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓေပေးသည့်ထူးခြားတက်ကြွနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတွေများများစားစားဂီတများအတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကျော်ကြားသော, ရီယိုအဟောင်းနှင့်အသစ်လာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့အရေးအပါဆုံးမြို့တ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Portal ကိုအဟောင်းနှင့်အသစ်အခွက်တဆယ်ပြနှင့် Samba, forró,, jazz, chorinho, maracatu နှင့်အများကြီးပိုအတွက်ဂန္ဖျော်ဖြေပွဲနှင့် show, ပွဲတော်များနှင့်ပါတီများကအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် divulging, မြို့တော်ရဲ့လေးနက်တဲ့ဂီတသမိုင်းအတွက်အရေးကွီးပါယုဂ်စူးစမ်း။ Music ကိုတမြို့လုံး၌အသက်ရှိသမျှရှုထောင့် permeating, Carioca ယဉ်ကျေးမှု၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပူနွေးသောရာသီဥတု, ဂီတအဘို့မေတ္တာ, Cariocas '' ပင်လူပေါင်းကောင်းသောနှင့်အသက်တာ၏ပျြောမှေ့ခွငျးအဘို့မိမိတို့ predilection ညအချိန်ရွှင်လန်းများအတွက်အများဆုံးထူးခြားတည်ဆောက်ခြင်းငှါကြီးအရပ်ရီယိုတဦးတည်း၏ရာ၌ခန့်ထားပြီ။ ငါမွို့၏တက်ကြွခရိုင်မှတဆင့်ရီယိုလေတိုက်နှုန်း LOVE ၎င်း၏တောင်ကုန်းကျော်ဝင်သောနှင့်စာဖတ်သူများကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ညအချိန် Recreational အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရောက်စေဖို့အရုဏ်မှမိုဃ်းမလင်းမှီကနေသူ့ရဲ့အရက်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်။ စနူကာအရက်ဆိုင်များ, ကျောက်လုံးကြီးကလပ်အသင်း, Samba ညဉ့, လမ်းစစ်ရေးပြ, ပါတီများနှင့်ပွဲတော်ခြစ်ခြစ်အရှိဆုံး, ခေတ်မီဆန်းပြားထူးခြားဆန်းပြားနှင့် buzzing အရက်ဆိုင်အတူတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည် - အစားအစာ, အဖျော်ယမကာ, ဂီတနှင့်ဖောက်သည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့အများဆုံးဒီကဗျာနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဖက်ရှင်တွေတင်ပြကြသည် - အလုပ်ခွင်, ပါတီများ, အားကစား, အဖြစ်အပျက်များ, နေ့စဉ်သုံး Recreational နှင့်ကမ်းခြေအဘို့အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးအပ်ခြင်း။ နိုင်ငံတကာနှင့်အမျိုးသားရေးစတိုင်ခေတ​​်ရေစီးကြောင်း၏သမိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦးကြည့်ရှု-In အနုပညာပုံစံ၏လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရေးပါမှုကိုတစ်သဘောမျိုးနှင့်အတူစာဖတ်သူများပြင်ဆင်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်ရုံနှင့်ဝတ်စုံအနေဖြင့်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့နှင့်ရေကူးစည်ရန်, စတ​​ိုင်စိတ်ကူးများတစ်ဦးရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာသူတို့အဗီရို reinvigorate နှင့် Carioca ဗေဒကိုနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီစာဖတ်သူများမှထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြသည်။
ဘောလုံးကွင်းထဲကနေ paragliding ရန်နှင့်အကြား၌ရှိသမျှကို - Cariocas အားကစားချစ်ကြတယ်။ ရီယိုမှာရေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကမ်းခြေ, သစ်တောနှင့်ခန္ဓာကိုယ် Cariocas အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အတူမှေမေတ္တာကိစ္စများအလယ်၌ရှိကြ၏ဟူသောအချက်ကိုမှ attests ။ ငါရီယိုအကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပေးချက်များပါဝင်ပတ်သက်ရရန်မည်သို့ရက်တွင်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များနှင့်မထုတ်ဖော်ပေးအပ်ခြင်း, တောင်, ကမ်းခြေတွေ, ပင်လယ်ရေနှင့်လေထု၏အားကစား Recreational စူးစမ်း LOVE ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လူကြိုက်များပြိုင်ကားကိုခေတ်သစ်ထိုကဲ့သို့သောလျှော့-line နှင့်မတ်တပ်ရပ်-up ကလျှောအဖြစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်မြင့်တက်မှုများ, သင်တန်းတွေ, ဒေသခံအသင်းများ, gyms နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ရပ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နဲ့တွဲပြီးဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါသည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့သမိုင်းကိုအထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝမတူညီနဲ့ ဘက်စုံသုံး-ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါရီယိုထုံးတမ်းနှင့်အလေ့အကျင့်၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှု, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအနုပညာနှင့်ဓလေ့ထုံးစံရောက်ရှိလာနှင့်မြို့ရဲ့အထင်ကရအဆောက်အ၏မွေးဖွား unpicks LOVE ။ ဒါဟာ 19 ရာစုအဟောင်းကော်ဖီစိုက်ခင်းထဲကနေ 20 ရာစုအစောပိုင်း၏ပွဲတော်မှ, ရပ်ကွက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်, ပွဲတော်များ, ပါတီများ, လာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်က, တယ်လီဗေးရှင်းပြပွဲနဲ့ဖက်ရှင်တွေ၏ဇာစ်မြစ်အဖြစ်အတိတ်၏ evocative တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအချက်အလက်များပေးပါသည် နှင့် 1970 ရဲ့ 80 ရဲ့ဂီတ effervescent ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အပေါ်ရီယိုရဲ့ကြီးထွားလာအရေးပါပုံကိုသတိပြုမိခြင်း, Portal ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူမျိုး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးပညာရှင်များများအတွက်သင့်လျော်သောမြို့တော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်, ပေးပါသည်။ နားလည်မှုနှင့်အသိအမြင်တိုးမြှင့်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသုံးဝင်သောစိတ်ကူးများထောက်ပံ့ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ချဲ့ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးသမား bourgeoning များအတွက်အကြံပေးချက်များ, နည်းပညာနှင့်အသုံးဝင်သောအဆက်အသွယ်ထင်ရှားကြ၏နေစဉ်, positioned အလယ်ဗဟိုစင်မြင့်ဖြစ်ကြ၏။
ကိုယ့်ရီယိုရဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုဖြတ်ပြီးထိုင်လျက်သူမ၏ညီမဖြစ်သူ-မြို့, သတျခဲ့တာပါဖြစ်ပါတယ်။ ငါရီယိုပြည်နယ်၏ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားဧည့်ရာပူဇော်သက္ကာဘို့အသိပညာပေးချဲ့ဖို့ရီယိုရဲ့စီမံကိန်းက LOVE ၏အစိတ်အပိုင်းသည်အတိုင်း, Portal ကိုအသေးစိတ်အတွက်တျခဲ့တာပါ၏မြေမှတ်တိုင်ကို Catalog ၏ရှုထောင့်အားလုံးကို examine ။ , ရွှေဝါကမ်းခြေ, ဗိသုကာပညာ, ပြတိုက်, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပန်းခြံများ, ခရီးသွားလမ်းညွှန်, စိတ်လှုပ်ရှားအမြင်များ, စားသောက်ဆိုင်, ရုပ်ရှင်ရုံ, အားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့်အပန်းဖြေချောင်အဖြစ်ဒေသ၏သမိုင်းကိုတွင်အရေးကြီးသောယုဂ်မှ flashbacks, Square ပြည်နယ်၏သာယာလှပ၏စိတ်နှလုံးမှာသတျခဲ့တာပါနေရာ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အသိဉာဏ် milieu ။
အရေးပါမှုနှင့်အရင်းအနှီးနှင့်ပြည်နယ်တပ်စွဲကြောင်းမြို့များ၏ဒါဇင်တို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာ synergic အသိအမှတ်ပြုပြီး, ငါရီယိုနာမည်ကြီးရပ်ကွက်အပြင်ဘက်အိပ်ရသောအမြို့မြို့, ခရိုင်နှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်. မျက်စိဖွင့်လှစ်သည့်အချက်အလက်များထောက်ပံ့ပေး LOVE ။ ပြည်နယ်အားလုံးသည် crevices နှင့်ထောင့်ဝှက်ထားလျက်, ယဉ်ကျေးမှု အစားအစာနှင့်လူမှုရေးကျောက်မျက်၏လိုက်စားအတွက်စူးစမ်းနေကြသည်။ ငါရီယိုစီပြည်နယ်၏ခြုံငုံထည်အတွက်အရေးပါကြောင်းနှင့်အရေးကြီးပြိုင်ဘက်မရှိအခန်းကဏ္ဍကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတိုင်းဒေသကြီးများ၏သမိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သာယာလှပသောရှုခင်းများစူးစမ်း LOVE ။
ငါရီယိုဓာတ်ပုံများများသည်ပြိုင်စံရှား LOVE, နှင့်အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၌တွေ့မရနိုင်ပါ။ ထောင့်, အလင်းရောင်, ဘာသာရပ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုဂရုတစိုက်တစ်ခုချင်းစီဓာတ်ပုံရိုက်ထူးခြားတဲ့နှင့်လန်းဆန်းအလင်း၌မြို့သူမြို့သားတစ်ဦးအသှငျအပွငျဖမ်းယူကြောင်းသေချာစေရန်ရွေးချယ်ထားကြသည်။ အနုပညာပစ္စည်းကိရိယာများပြည်နယ်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးရုပ်တုများဖန်တီးရန်, ဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးအသုံးပြုသည်။ ငါရီယို LOVE ၏ဓာတ်ပုံပြပွဲဒဿနကျောထောက်နောက်ခံလူများနှင့်ကဖေးများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများဖမ်းယူဖို့ရှိတဲ့ drive ဖြစ်ပါတယ်။ သောအရပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုမရအောင်ရီယိုရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်မြို့ပြအံ့ဘွယ်သောအမှုမြို့ခံများနှင့်ဧည့်သည်များအပေါ်ရှိသည်သောအကျိုးသက်ရောက်ဖော်ထုတ်, ချိတ်ဆက်ထားတယ်။
ငါရီယိုငါရီယို LOVE ၏အကြောင်းအရာများ, စတိုင်နဲ့ဒဿနကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်လူသိများစာဖတ်သူတွေရောက်ရှိဖို့, line ကို-On နှင့်ပြည်တွင်းဖြစ်မြင့်မြင့်မြင်သာအစီအစဉ်များနှင့်မိတ်ဖက်မှတဆင့်တကမ္ဘာလုံးကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ် LOVE ။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ထဲတွင်ဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခွဲဝေပေးခြင်း၏အဓိကဧရိယာမှတ်တိုင်ဒေသများနှင့်ဟိုတယ်များအပေါ်အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်နဲ့အတူနာမည်ကြီး Zona Sul နှင့်လှပ Barra ကို da Tijuca ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ILOVERIO.comဝဘ်ဆိုဒ်ငါစူးစမ်းခြင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဆောင်းပါးတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံ၏အနံအဖြစ်အသက်ရှု-ယူပြီးဓာတ်ပုံတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတဆင့်တမြို့လုံးကို re-ကစိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့သူဌေးများနှင့်ရှေ့ဆောင်ဝဘ် Portal ကိုအပါအဝင်ထုတ်ကုန်များ၏ရီယိုအစုစု LOVE ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျအခြားမည်သည့်မြို့သည်ရှေ့တော်၌ပြုသောအမှုဘယ်တော့မှ Portal ကိုရဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာနှင့်ဒီဇိုင်း, ကိုအလွယ်တကူကနိုင်ငံတကာစာဖတ်သူများ၏ကျယ်ပြန့်ဖို့အမြင့်ဆုံးအဆင့်နှင့်တန်ဖိုးထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိလာတဲ့, အသုံးပြုသွားမည်ကြောင်း content တွေကိုပေါကြွယ်ဝသည်။ ကြော်ငြာခြင်းမိတ်ဖက်တစ်ကျယ်ပြန့် selection ကိုရိုးရှင်းပြီးထို Portal ကိုရဲ့စာသားနှင့်ဓာတ်ပုံပြပွဲ content တွေကိုဖြည့်ဖို့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, နှင့် ဘက်စုံသုံး-စာမျက်နှာ feature ကိုဆောင်းပါးများကိုအပါအဝင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာဖန်တီးမှုဟာယပူဇော်သက္ကာကိုအလွန်ပရိသတ်တွေအကျိုးခံစားရဖို့လူသိများချုပ်လုပ်မိတ်ဖက်, sponsor များနှင့်မြေတပြင်လုံးသည်မြို့တို့ပါဝင်သည်။ စရိတ်နှင့်ရရှိနိုင်မှုကြော်ငြာအရွယ်အစား, ဒဿနနှင့်သတင်းစကားသည်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။